Gam akporo Nougat abịa na NVIDIA Shield Mbadamba ụrọ na K1 Mbadamba | Gam akporosis
Ọ bụrụ na anyị na-eche izu izu jupụtara nke asịrị, ha bụkwa maka Nougat mmelite na-abịa nke nta nke nta gaa na nke ọzọ nke ụdị na ọnụ. Naanị ụnyaahụ Sony malitere ọzọ na ntinye nke Nougat maka Xperia Z5, Z3 + na mbadamba Z4, mgbe ha kwụsịtụrụ mmelite ahụ n'ihi nsogbu ụfọdụ zutere.
Ugbu a bụ oge maka Mbadamba Shield abụọ NVIDIA nke wepụtara na 2014 na 2015. Ma ọ bụ na taa Gam akporo 7.0 Nougat melite, ma ọ bụ Nkwalite Ahụmahụ 5.0 (nke ahụ bụ ihe NVIDIA kpọrọ ya) na mbadamba abụọ ka ndị ọrụ nwee ike ịnweta nkwado maka ọta Shield ọhụrụ.
Ma, ọ bụ ọnụ ọgụgụ buru ibu nke mgbanwe Nougat na mmezi nke achọpụtara ịbụ àgwà kachasị mma nke mmelite a na usoro nke interface na ndị ọzọ. Otu n'ime ha bụ ike kewaa ihuenyo, atụmatụ ọtụtụ maka ngwa, Doze na Go system maka arụmọrụ batrị ka mma, Unicode 9 emojis, ọrụ nchekwa data dị mma yana ọkwa amamịghe.
Na-enweta Disemba 2016 patch nche na mbadamba mbụ Shield Tablet na K1 Tablet, ma e wezụga ịnweta NVIDIA's Shield Rewards program na ọtụtụ mmelite ojiji. Ihe kariri mmelite na-adọrọ mmasị ka ị na-ekwu maka ngwaọrụ nke emere na 2014 n'okwu ikpe nke mbadamba nkume mbụ.
Ngwaọrụ emebere maka egwuregwu na nke na-atụ aro ịbịaru ụdị aha ndị ọzọ chọrọ arụmọrụ dị ukwuu na akụrụngwa na ike na ngwaike. Mgbe NVIDIA Shield Pro ọhụrụ dị na ahịa na 500GB nke ebe nchekwa dị n'ime na kaadị SD, NVIDIA achọghị ịpụ nye ndị nwe mbadamba nkume abụọ ahụ ka ha nwee obi ụtọ na omume ọma nke Nougat.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mbadamba gam akporo » Android 7.0 Nougat na eze biara na NVIDIA Shield Tablet na Tablet K1